ट्यूनियो Zafer का लेखहरु मा Martech Zone
द्वारा लेखहरू ट्यूनियो जाफर
ट्युनियो जाफर सीईओ हुन् pCloud AG - कम्पनी जसले pCloud भण्डारण प्लेटफर्मको विकास र प्रदान गर्दछ। उहाँसँग टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा व्यवस्थापन र मार्केटिङको 18 वर्ष भन्दा बढी अनुभव छ, र MTelekom, Host.bg, Grabo.bg, Mobile Innovations JSC र अन्य जस्ता धेरै सफल व्यावसायिक परियोजनाहरूमा भाग लिनुभएको छ। क्लाउड भण्डारण कम्पनीको एक नेता र प्रबन्धकको रूपमा, Tunio ले अन्तिम प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षा र लागत-प्रभावकारीता जस्ता क्षेत्रमा नवीनतालाई बढावा दिन्छ। ट्युनियोले व्यक्ति र व्यवसायका लागि द्रुत रूपमा बढ्दो IT बजारमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने काम गर्दै आफ्नो टोलीमा अग्रगामी सोचलाई प्रोत्साहित गर्दछ।
बुधबार, नोभेम्बर 17, 2021 बुधबार, नोभेम्बर 17, 2021 ट्यूनियो जाफर
क्लाउडमा निर्बाध रूपमा फोटो, भिडियो र संगीत जस्ता बहुमूल्य फाइलहरू भण्डारण गर्ने क्षमता एक आकर्षक सम्भावना हो, विशेष गरी मोबाइल उपकरणहरूमा (सापेक्ष रूपमा) सानो मेमोरी र अतिरिक्त मेमोरीको उच्च लागतको साथ। तर क्लाउड भण्डारण र फाइल साझेदारी समाधान छनौट गर्दा तपाईंले के हेर्नु पर्छ? यहाँ, हामी सबैले आफ्नो डाटा कहाँ राख्ने भनेर निर्णय गर्नु अघि विचार गर्नुपर्ने पाँचवटा कुराहरू तोड्छौं। नियन्त्रण - के म नियन्त्रणमा छु? मध्येको एउटा
लकडाउनमा बजारका लागि सहयोगको महत्त्व
मङ्गलबार, अक्टोबर 27, 2020 मङ्गलबार, अक्टोबर 27, 2020 ट्यूनियो जाफर
गर्मीमा बजारहरू र मुख्य कार्यकारी अधिकारीहरूको अध्ययनले पत्ता लगायो कि केवल cent प्रतिशतले लकडाउनमा जीवनको सकारात्मक पक्ष पाएनन् - र एकल व्यक्तिले भनेन कि उनीहरू त्यस समयमा कुनै कुरा सिक्न असफल भए। र वसन्त लकडाउन पछि मार्केटिंग गतिविधि को लागी पेन्ट-अप मांग संग, यो ठीक छ। XPlora को लागी, सोफिया, बल्गेरियामा आधारित मार्केटिंग र डिजिटल एजेन्सी, डिजाइन फाइलहरू साझेदारी गर्ने क्षमता